Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJapan eziQhekezayo » I-volcano yaseJapan iqhuma ikhupha uthuthu lweekhilomitha esibhakabhakeni
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zaseJapan eziQhekezayo • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
I-volcano yaseJapan iqhuma ikhupha uthuthu lweekhilomitha esibhakabhakeni.
IJapan likhaya leentaba-mlilo ezingaphezu kwe-100, kwaye umsebenzi wenyikima kulo mmandla uphezulu. NgoLwesine odlulileyo, indawo yokukhutshelwa ngaphandle kwesiqingatha seemayile yayijikeleze iNtaba iAso emva kogqabhuko-dubulo oluncinci.
INtaba iAso -yona ntaba-mlilo yaseJapan-iqhume malunga ne-11: 48 kusasa ngoLwesithathu.
Amagosa aseJapan alumkisa abantu ukuba bazikhwebule kwisoyikiso sokugqabhuka kwamatye kunye nokuwa kwamatye.
Ummeli we-JMA uxwayise ngexesha lenkomfa yeendaba ye-TV ukuba igesi eyityhefu nayo inokukhupha kwi-volcano.
Amagosa aseJapan alumkisa abantu ukuba bahlale kude neNtaba iAso, kwisiqithi esisemazantsi saseKyushu, njengoko intaba-mlilo yaseJapan iqhuma kakhulu, ikhupha iigesi ezishushu kunye nothuthu oluziimayile ezimbalwa ukuya esibhakabhakeni.
Amapolisa endawo athi akukho ngxelo ukuza kuthi ga ngoku ngeengozi okanye ngabantu abalahlekileyo. Bathe abantu abali-16 abakhenkethi ababesentabeni ngaphambilana ngaloo mini babuya bekhuselekile.
Ngokutsho I-arhente yeMeteorological yaseJapan, INtaba iAso, indawo yabakhenkethi kwisiqithi esisezantsi selizwe saseKyushu, ikhuphe iziqwenga zomlotha oziikhilomitha eziyi-3.5 (2.2 miles) ukuphakama ngolwe-Lwesithathu xa iqhuma malunga ne-11: 43 ekuseni (02:43 GMT).
Iarhente yemeteorological ibeke inqanaba lokulumkisa kwabo bakufutshane ne-1,592 yeemitha (5,222ft) volcano ukuya kwisithathu kwabahlanu kwinqanaba lomngcipheko. Ngenxa yomngcipheko wamatye amakhulu awayo kunye nokuhamba kwe-pyroclastic ngaphakathi kwe-1km (0.6 yeekhilomitha) ukusuka kumngxuma omkhulu weNakadake, abantu baxelelwa ukuba bangasondeli kule ndawo.
"Ubomi babantu yeyona nto iphambili kuthi, kwaye sisebenza noMkhosi woKhuselo, amapolisa kunye nabacimi-mlilo ukujongana nale meko," utshilo uNobhala weKhabinethi eyiNtloko uHirokazu Matsuno.
Isixeko esikufutshane saseMt Aso yiAso, enabemi abamalunga nama-26,500 abantu.
INtaba iAso yadubula kancinci ngo-2019, ngelixa eyona ntlekele ye-volcanic yaseJapan iphantse kwiminyaka engama-90 yabulala abantu abangama-63 kwiNtaba i-Ontake ngoSeptemba ka-2014.
Japhan likhaya leentaba-mlilo ezingaphezu kwe-100, kwaye imisebenzi yenyikima kwingingqi iphezulu. NgoLwesine odlulileyo, indawo yokukhutshelwa ngaphandle kwesiqingatha seemayile yayijikeleze iNtaba iAso emva kogqabhuko-dubulo oluncinci.
Kunye nokuqhuma kwentaba-mlilo, iinyikima zixhaphake Japhan, yenye yezona ndawo zisebenza kakhulu kubuMhlaba. IJapan ibangele malunga neepesenti ezingama-20 zenyikima zomhlaba ezinobukhulu obungu-6 okanye ngaphezulu.